amabutho Interior Ministry kukhona amabutho empi ukuthi ukuvikela isimo kanye netakhamiti talo kuleli zwe. Bagcina ukuhleleka ngokomthethosisekelo ezilandelayo ukuphepha komphakathi kanye ukuzivikela insimu ka WaseRussia. Domestic amayunithi ekhethekile isebenzisane onogada basemngceleni, benza izenzo ezibonisa ahileleke countering ubuphekula, ukunikeza oda izimo eziphuthumayo. Kule kusobala ukuthi amabutho yangaphakathi kukhona siqaphe mayelana kokubili sempi futhi nenkathi yokuthula.
Servicemen abe usuku zemikhosi - Usuku amabutho sangaphakathi Russian Interior Ministry, lapho bayakhonza abangane abaseduze, abaphathi, abangane kanye nozakwabo.
Umlando of Interior Umbutho
Division, uma kuthathwa njengengxenye umlando - esemancane. Kusukela nesithupha kuya kweleshumi nesikhombisa, ngokuvamile oda yomphakathi kulandela a amabutho Royal. Ivan Grozny Institute ihlelwe "abaqashi", ezazihlanganisa izikhulu servicemen. UPetru kuqinisekiswe ukuphepha maphakathi nezwe futhi ikhanda Battalion. Walandelwa u-Alexander I wadala "Yangaphakathi Guard lamabutho" e 1811. Namuhla kuyiholide - Usuku Russian Interior Ministry, oluba ngosuku indalo yayo. I lamabutho eyingoduso kusesho ukuthunjwa izigebengu, basiza ekwenzeni izinqumo zokwahlulela Tracking phansi amazwe ngokungemthetho endaweni ka-izimpahla Russian futhi imoto. Ngakho ekuqaleni kwekhulu nesishiyagalolunye esimweni babe ephelele amabutho yangaphakathi.
Ezinsukwini eSoviet Union kuqala leli VOHR amabutho ukuthi kukhona i-KGB kwabaqaphi. Eminyakeni embalwa kamuva, base yizinqamu. Ngezinye izikhathi ezahlukene, lezi amabutho igama elihlukile: i-GPU, GPU, NKVD, MGB, futhi ekugcineni, Wezangaphakathi. Phakathi nempi, amabutho yangaphakathi kwakufanele ukufeza imisebenzi ekhethekile futhi iqhaza empini.
Ezemfundo Interior Umbutho Usuku e-post-Soviet Russia
Ungene BN Yeltsin ngaphambilini ukusungulwa umkhosi nesishiyagalolunye Mashi 1996. Kusukela ngaleso sikhathi, Suku Ministry Interior Russia ayegubha wamashumi amabini anesixhenxe ka-March.
Yingaleso sikhathi-ke ekuqaleni kwekhulu nesishiyagalolunye u-Alexander I kuqala leli ihlukane yabalindi kwangaphakathi.
Ngaleso sikhathi samanje - kuwuhlobo ekhethekile, okuyinto banesibopho ukuphepha kwe-Russia nase umphakathi isiRashiya, ukuvikela amalungelo nenkululeko izakhamuzi ngokumelene izenzo ezingekho emthethweni.
Babuka phezu kulondolozwe isithunzi sendawo isimo, ukuvikela izindawo ezibalulekile futhi izimpahla ehilelekile lokuvikeleka kwezifiso ezisemqoka ezingumphumela umngcele Russian Federation, ukulwa nobugebengu, ukuqinisekisa ukuthula emphakathini.
Uma Nokho, kuleli zwe okuyothiwa umthetho karate, ke uyoba nomthwalo futhi ukuze kuxoshwe isitha ubudlova nempi futhi umngcele kwezinhloko zamaviyo.
amabutho Yangaphakathi izikhali zabo, ehlanganisa ukudayiswa kwezikhali ezincane, izimoto, izimoto armored, wezikhali, zezindiza kanye nezinye.
Kususelwa ukubaluleka elihlukile kulesi sikhungo ngosuku kumiswa Russian Ministry Interior, alikho isosha akumelwe ushaywe indiva.
amaviyo alo ukuqhubeka ukuthuthukisa namuhla. Lena yindlela enamandla, ukuhlinzeka oda nokuvikeleka isimo, kumiswa.
Usuku ochwepheshe forensic Ministry Russian Wezangaphakathi
Ngo-March unofficially kugujwa omunye umkhosi amayunithi ngabanye iziqhumane. Lokhu Day Ministry forensic Wezangaphakathi eRussia.
Ngalolu suku ngo-1919 uphenyo lobugebengu we RSFSR wadala IKhabhinethi forensics. Nakuba iyunithi wabizwa ngokuthi Tsentrorozysk.
Nokho, isikhungo sokuqala salolu hlobo sihlehlela emuva Russia ngisho Tsarist, okungukuthi amathathu nanye Disemba 1803. Khona-ke wavula Council Medical eMnyangweni Wezangaphakathi.
Okokuqala, izazi ezimbalwa kakhulu olwenziwa kuhlolwa okwenziwayo futhi umsebenzi eziyisisekelo ucwaningo imibhalo kanye nezinto ezihlukahlukene kunikezelwe.
Engxenyeni yokuqala yekhulu lamashumi amabili, kubangelwe izifundo ezikhethekile ochwepheshe forensic we NKVD, kwahlelwa amayunithi zesayensi kanye lobuchwepheshe.
Kancane kancane, uhlaka lwenhlangano ashintshiwe. Ayedabuka uphenyo lobugebengu, base baba lwezemisebenzi yamaphoyisa zesayensi kanye lobuchwepheshe. Njengengxenye ATS uhlala kusukela ngo-1964 kuya 1981.
Forensic Centre namuhla
Kusukela 2003, zingabantu ingxenye Ministry Interior, womnyango wamaphoyisa, womnyango wamaphoyisa, UVDT, OVDRO, ngokuhambisa nenkaba-Forensic, okuyinto iyunithi eyinhloko uhlelo uchwepheshe Ministry Interior.
Ngaphezu ubuchwepheshe kanye izinsalela, enkonzweni imisebenzi zihlanganisa izikhali isitifiketi futhi umphakathi, ukuhlanganyela emisebenzini zomthetho kanye nabanye.
Siyakuhalalisela kusukela Russian Ministry Interior
abasebenzi ezisebenza kanye nezingqalabutho ukuthola siyakuhalalisela. izinceku Ikakhulukazi ovelele ngoSuku Russian Interior Umbutho ukhishwa ngiyabonga, izipho oda noma abelwe ezinhlwini lempi. Futhi elibamba ezihlukahlukene izenzakalo zemikhosi lapho ukuphathwa ezingeni eliphezulu ngithanda ukubonga futhi ukuhalalisela amaviyo alo.
Ngaphezu imikhosi kanye nokwethulwa kwe nezipho ezivela izihlobo, abangane kanye nozakwabo enkonzweni siyakuhalalisela ngoSuku Ministry Interior Russia kanye nje amazwi. Bethumela imilayezo ngocingo futhi anikeze amakhadi.
Abesilisa nabesifazane abakhonza Ukwakheka kwezinhloko zamaviyo yangaphakathi ukuvikela abantu futhi kuvimbele sifo. Nsuku zonke ziya ku umsebenzi oyingozi, kokubanga ngokwabo. Sanibonani Okhethekile Wosuku MVD Russia enothisa umsebenzi eyinkimbinkimbi lempi.
Umsebenzi ezihlekisayo inikeza nganoma yisiphi iholide!
Usuku Ikhutshaziwe Abantu eRussia. Usuku Lwamazwe Ngamazwe Lwabantu Abakhubazekile - 3 Disemba
Lezi siyakuhalalisela ku Victory Day
Yiziphi amagama wedding yokugubha usuku okwenza izinto eziyizikhumbuzo ukubanika?
Kuyini isifinyezo? Izifinyezo ngemininingwane: izibonelo
Ulimi Modern Russian futhi isimo salo
Izinkampani abacebe kakhulu emhlabeni abangekho elinde ochwepheshe
Ngempumelelo Ukuphathwa kwabasebenzi: Kuphi ukuthola turpentine abasebenzi?
Yini abantu abayizimpumputhe ukubona ubuhle? Thola - futhi umbono wakho wobuhle phakade ukushintsha